ကြီးမားသောဂရုဏာမေတ္တာတော် - ပြည်ပရောက် မြန်မာ-သင်းအုပ်ဆရာ (၃)
ကြီးမားသော ... ဂရူနာမေတ္တာတော် - ဆရာတော်ဦးလတ်ယေရှဲ
လူအများစုကတော့ အောင်မြင်သောသူများဆိုရင် ငွေကြေးချမ်းသာသူများ၊ တေးဂီတ၊ရုပ်ရှင်၊အနုပညာကျော်များ၊ အာဏာပိုင်ကြီးများ နဲ့ ထိပ်တန်းရောက်နေသူများကို မြင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်မှုကြီးများ၊ သူတို့ရဲ့ ၀င်ငွေကောင်းမှု နဲ့ သူတို့ရဲ့ ကျော်ကြားမှုများကို သတိထားမိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရှေ့တန်းမှာ မမြဲနေရရကြတယ်။ အဖေါ်ကောင်းတွေရှိတယ်။ ဇိမ်ခံအိမ်နန်းကြီးတွေ၊ အဆင့်မြင့် Hi-Tech လုံခြုံရေးနည်းစနစ်များ .. အားလုံးစုံနေတာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ သတိမထားမိတဲ့ များပြားစွာသော လူတွေဟာ သူတို့နဲ့ မျက်နှာစာ တဖက်မှာရှိနေကြပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး များစွာနဲ့ ကလေးများအပါအ၀င် နေစရာအိမ်တောင်မရှိပဲ .. သစ်ပင်အောက်မှာ အိပ်ရသူများ၊ စားစရာ၊ သောက်စရာတောင်မရှိပဲ အိပ်ရသူများ၊ နွေးအောင် ခြုံစရာ၊၀တ်စရာတောင် မရှိသူများ၊ မိတ်ဆွေမဲ့နေသူများစွာ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ သတိမမူ ခံရသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူတို့ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ မေတ္တာရှင်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သခင်ယေရှု လို့ခေါ်ပါတယ်။
အထီးကျန်နေတဲ့ .. မျက်ရည်ရွမ်းနေတဲ့၊ ကျိုးပဲ့ကျေမွသော နှလုံးသားနဲ့ မြောက်များစွာသော လူတွေရှိပါတယ်။ လူမှုရေး နိုမ့်ကျမှုများ၊ အပြစ်ရဲ့ သားကောင်၊ ရောဂါဘေးကပ်များရဲ့ အောက်မှာ ခံစားနေရသူများ .. အကူအညီလိုနေသူများရဲ့ ငိုကြွေးမည်တမ်း အသံများပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သခင်ယေရှု ကမ္ဘာကြီးကို ကြွလာခြင်းဟာ ထိုလူများကို ကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ထာဝရအသက် .. ကောင်းကင်ပရတ္တိနိဗာန်ကို ခေါ်ဆောင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုခရစ်ဟာ သူ့အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်ပြီး ထိုသူများကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ သခင်ယေရှုရဲ့ ဂရုနာတော်ဟာ ကြီးမားလှပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မုန်တိုင်းဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေစဉ်၊ မြေငလျှင်ဒဏ်၊ သဘာဝဘေးဒဏ်များ ခံစားနေစဉ်မှာ သခင်ယေရှု့ရဲ့ ဂရုနာတော်ကို သတိရပြီး လက်တော်၊ ခြေတော် အင်အားတွေနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့ သွားရောက်ပြီး ဘုရားရှင် ယေရှုရဲ့ ဂရုနာတရားကို ပြသ၊လုပ်ဆောင်၊ပြောကြားနေကြပါတယ်။ သတိမမူ ခံရသူများကို ယေရှုရဲ့ မျက်လုံးအားဖြင့် သတိမူစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ သူတို့ကို ချစ်မေတ္တာပြရပါမယ်။ ယေရှုရဲ့ ခွန်အားကြီးလှသော အနာရောဂါငြိမ်စေတဲ့ လက်တော်အားဖြင့် သူတို့ကို ကူညီရပါမယ်။
ထိုအခါ ကိုယ်တော်က၊ စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏။ ရိတ်သော သူတို့သည် နည်းကြ၏။ ထိုအကြောင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှါ စေလွှတ်တော်မူမည် အကြောင်း၊ စပါးရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော့ဟု တပည့်တော် တို့အားမိန့်တော်မူ၏။ မဿဲ ၉း ၃၇-၃၈
မင်းကြီးက၊ ငါအမှန်ဆို သည်ကား၊ သင်တို့သည် ဤသူတည်းဟူသော ငါ့ညီတို့တွင် အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အား ပြုကြသမျှတို့ကို ငါ့အားပြုကြပြီဟု ပြန်၍ မိန့်တော်မူလတံ့။ မဿဲ ၂၅း၄၀
"The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; Pray ye therefore the Lord of harvest, that he will send forth labourers into His harvest." (Matthew 9:37-38). "Verily I say to you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me." (Matthew 25:40).
Rev. Latt Yishey
ဆရာတော်၏ http://access2ministry.blogspot.com/ မှ တဆင့် မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်သည် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပထမမြန်မာအသင်းတော်မှ သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ပြီး .. အထုပ္ပတိအကျဉ်းကို http://burmesebible.com/bio/latt.yishey.htm တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။